Ny bokiko momba ny varotra amin'ny taona | Martech Zone
Ny bokiko momba ny varotra amin'ny taona
Alatsinainy 9 Febroary 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Volana roa lasa izay dia nanontaniana aho raha te hamaky The Perfection of Marketing an'i James Connor. Minono aho a boky marketing dia namaly avy hatrany aho. Tsy mora variana amin'ny hevitro koa aho, araka ny hitanao amin'ny ahy famerenana ny Content Rich.
Nandefa boky tamiko foana ny mpanao dokam-barotra nataon'i James Connor. 😉
Tokony ho fantany fa mpandresy izany! Rehefa avy namaky ilay boky aho dia tena faly fa nangataka boaty iray tamin'ireo boky ary nomeko an'ireo bilaogera marketing hafa. Hatreto dia niombon-kevitra tanteraka ny valiny - ahy ity Boky fivarotana amin'ny taona!
Nandany fotoana i James tamin'ny herinandro lasa teo ary azoko natao ny nanadihady azy an-telefaona. Izy dia malemy paika sy tsara fanahy amin'ny fotoanany. Tsy azoko antoka fa gaga izy tamin'ny fihetsiky ny boky - izany no izy Ny an'ny James Group's playbook. Ny James Group dia paikady marika sy maso ivoho mivarotra asa fanompoana an-tsakany sy an-davany natao hanampiana ireo orinasa manana afovoany hitombo. Ary mitombo izy ireo, miaraka amin'ny a 95% ny tahan'ny fahombiazana ary tsy mpanjifa tokana mijaly mandritra io fitotonganana io.
Tsy teôria ilay boky, ary tsy mpanoratra no nanoratra azy… Nandany fitsapana 6 taona ny James Group ary 6 taona nampiofanany ireo fomba ireo. Nilaza i James fa tsotra ny manoratra boky satria ny fomba niarahan'izy ireo niasa tamin'ny mpanjifany isan'andro.
Betsaka ny antony tiako be dia be ilay boky, anisan'izany ny:
Tena zava-misy ny zava-misy sy tarihin'ny dingana, nosoratana ho an'ny CEO - fa tsy ny CMO!
Ity boky ity dia nosoratana ho tantara iray avy amin'ny consultant mankany amin'ny CEO, ny CEO dia fitambaran'ireo mpitarika orinasa an-jatony niarahan'i James nandritra ny taona maro.
Ny toko tsirairay dia manana synopsis sy fanontaniana ho an'ny mpamaky, lasa torolàlana azo ampiharina ho an'ny mpitarika orinasa hianatra ny atiny sy ny ivelany amin'ny marketing.
Ny boky dia mora vakiana, fa miresaka amin'ny lafiny marketing rehetra - manomboka amin'ny logo sy marika hatramin'ny SEO ary famolavolana tranonkala.
Ny antsipirian'ny boky ao amin'ny boky Return on Marketing Investment - zavatra akaiky sy malalako ato am-poko!
James Connor dia liana amin'ny boky - ary miresaka ny fiantraikan'ny fandraharahana mitombo antonony mety hamaha ny fitotonganan-karena:
Raha mila kopian'ny boky maimaimpoana ianao dia mangataha kopia amin'ny alalàn'ny taratasy fifandraisako miaraka amin'ny antsipiriany momba ny hoe iza ianao, ny bilaoginao (ilaina) ary ny antony itiavanao kopia. Handefa kopia ho anao aho raha mbola mampanantena ny hanao bilaogy momba izany ianao rehefa avy mamaky ilay boky. Manana kopia voafetra ihany sisa tavela - ka aza hadino ny manao azy haingana. Raha voafidy ianao dia hanoratra indray aho ary hangataka adiresy handefasana azy.
Aza adino, azonao atao ny misintona ny toko 4 voalohany amin'ny alàlan'ny tranokala The Perfection of Marketing… ary azonao atao ny mividy ilay boky amin'ny andiany 3 amin'ny vidin'ny 1.
Misaotra manokana an'i James noho izy nanokana fotoana tao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo be resaka tamiko.
Ohatrinona no aloanao amin'ny Twitter?
10 Feb 2009 tamin'ny 3:09 maraina
Ekeko fa boky tsara ity, Doug. Amin'ny maha mpivarotra mandritra ny androm-piainany ahy dia toa zava-kanto mainty amiko foana ny varotra marika, misavoritaka sy voasaron'ny zava-miafina. Ny làlan'i James Connor dia làlana sy lozika. Heveriko fa tsy mbola nahazo fampahalalana mahasoa kokoa avy amin'ny boky fandraharahana tamin'ny famakiana fohy toy izany.
10 Feb 2009 tamin'ny 10:23 maraina
Ny VP an'ny Marketing dia nanome ahy an'ity boky ity ho fanomezana. Novakiako tamin'ny sidina nankany sy ho any NYC tamin'ny herinandro lasa teo. Raha ny marina, ny Perfection of Marketing no boky fandraharahana voalohany novakiako "toy ny boky". Ampy ny tantara any hitazomana anao ho liana ary karazan'adala anao ny mianatra lesona sarobidy sasany. Zavatra tsara.